SAWIRRO-Qaar kamid ah suuqyada Garoowe oo maanta xiran iyo shacabka oo cabanaya. – Radio Daljir
SAWIRRO-Qaar kamid ah suuqyada Garoowe oo maanta xiran iyo shacabka oo cabanaya.
Janaayo 29, 2017 2:25 b 0
Garoowe, Jan 29 2017-Suuqyada waaweyn ee magaalada Garoowe ayaa saaka xirmay kadib markii ay isugu soo bexeen ganacsato iyo dadweyne haween u badnaa oo ka caraysnaa korukaca sicirka iyo qiimaha dollarka.
Suuqa hilibka iyo qudaarta ee Inji, bacadlaha Fadhi-xun iyo xarumaha ganacsiga ku teedsan laamiyada magaalada ayaa guud ahaan xirnaa ilaa salaadda duhur ee maanta.
Qaar kamid ah haweenkii soo abaabuley dhaqdhaqaaqaan cabashada ah ayaa sheegay inuusan waxba iska bedel sarifkii dollarka ee dhowaan dowladdu jaangooyada u samaysay, loona baahan yahay in wax laga qabto.
Qaar kamid ah go’aamadii madaxweynaha Maraykanka oo maxkamadi laashay.